Fikambanan’ny mpitsara rugby malagasy (2ARM) : havoaka ny lisitr’ireo ara-dalàna sy ireo voaroaka | NewsMada
Fikambanan’ny mpitsara rugby malagasy (2ARM) : havoaka ny lisitr’ireo ara-dalàna sy ireo voaroaka
Ho fampandrosoana sy ho famerenana ny hasin’ny mpitsara rugby malagasy, nivory tsy ara-potoana, ny fikambanana (2ARM). Notapahin’ny rehetra tamin’izany fa havoaka ofisialy ny anaran’ireo ara-dalàna sy ireo voaroaka.
Tinapaky ny “Association des arbitres de rugby malagasy” (2ARM), nanao ny fivoriana tsy ara-potoany, ny alahady lasa teo tetsy amin’ny EPP Ambodin’Isotry, fa havoaka ofisialy ny lisitr’ireo mpitsara voaroaka noho ny kolikoly nataony. Hampahafantarina ny Malagasy rugby ny sazy mifandraika amin’izany. Etsy ankilany, hatao lisitra mazava ihany koa ny anaran’ireo mpitsara am-perinasa sy ara-dalàna, eken’ny fikambanana ary nahazo alalàna hitsara baolina. Nanamafy Rakotomalala Johnson (Nest), filohan’ny 2ARM, fa tsy ekena ny fitsarana ireo lalao atao ao amin’ny kianja Malacam, karakarain’ny ligin’Analamanga. Raha misy mitory izy ireo, anisan’ny mitory azy ireo ihany koa ny “association des arbitres de rugby de malagasy” (2ARM). Nohamafisiny fa tsy hahazo fiofanana intsony izay mbola mikiry manao izany.
Marihina fa fampiraisana sy fampihavanana ireo mpitsara baolina rugby rehetra ny tena anton’ny fivoriana. Nisy ireo mpitsara avy ao amin’ny kianja Malacam nanatrika izany, niaraka tamin’ireo izay avy etsy amin’ny kianja Makis Andohatapenaka.
Nangataka ireo mpitsaran’ny Malacam mba hatao amin’ny andro tsy hisian’ny baolina ny fihaonana, hahafahan’ny rehetra manatrika izany.
Tetsy ankilany, naneho ny alahelony Rakotomalala Johnson, amin’ny tsy fanajana nasehon’ireo mpitsara hafa sy ny ligin’Analamanga. “Efa nilazana iray volana mialoha ireo mpitsara rehetra sy ny ligy ary ireo seksiona efatra fa hisy fivorian’ny fikambanana, ny 12 novambra, saingy tsy noraharahana izany. Nanaja ny ligy ny tenako ary nandefa taratasy tany amin’ny filohany, niangavy hampitsaharana ny lalao amin’io andro io fotsiny, saingy tsy nahazo valiny. Marihiko tsara fa tsy hijerena mpitsara avy atsy na aroa ny fihaonana fa fitadiavam-bahaolana. Araka izany, tsy afaka hiara-kiasa amin’izy ireo izahay satria tsy mifanaja”, hoy izy.